Vaovao - Solomaso solomaso, palitao, sneaker ary akanjo hafa (Prime Prime Day) tsara indrindra (2020): tahiry lamaody sy fitafiana voalohany notaterin'ny Retail Egg
Solomaso solomaso, akanjo, kiraro ary akanjo tsara indrindra amin'ny Prime Day (2020): Ny tahiry lamaody sy akanjo voalohany notaterin'ny Retail Egg
Ny varotra, akanjo sy kiraro ary kiraro ho an'ny lehilahy, ny Fetibe Golden tamin'ny taona 2020, anisan'izany ny akanjo ambony, kiraro, solomaso solomaso ary fihenam-bidy bebe kokoa amin'ny akanjo, kiraro ary kojakoja
Tadiavo ny fifanarahana lamaody, akanjo ary kiraro voalohany tsara indrindra amin'ny Amazon Prime Day, izay ahitàna ireo kiraro malaza indrindra, kiraro fihazakazahana, akanjo, palitao, akanjo ba ary solomaso solomaso. Ity ambany ity ny rohy mankamin'ny fifampiraharahana malaza.
Mitsitsia hatramin'ny 58% amin'ny akanjo ivelany, palitao ary palitao avy amin'ny marika ambony anisan'izany i Calvin Klein, The North Face, Carhartt ary Columbia amin'ny varotra Amazon Prime Day
Mitsitsia hatramin'ny 42% amin'ny palitao, palitao, palitao ary palitao avy amin'ny marika ambony toa ny The North Face, Steve Madden, Columbia ary Calvin Klein amin'ny fampiroboroboana Amazon Prime Day
Mitsitsia 42% amin'ny palitao Columbia Vehivavy Arcadia II amin'ny palitao ambony Amazon-Shell miaraka amina fitaratra azo ahodin-tanana, hem azo amboarina sy kitapo misy zipper
Vidio ny palitao ranon'orana an'i Glennaker an'ny Columbia Boy ao Amazon ary hitehirizana hatramin'ny 43% -ny akorandriaka nilona tantera-drano dia mateza ary mahazaka orana mivatravatra milatsaka
Mitsitsia 41% amin'ny palitao Softshell Ascender Lehilahy Kolombiana amin'ny volon'ondry Andean tsy misy tantera-drano sy tantera-drivotra vita amin'ny polyester 100%
Mitsitsia $ 30 amin'ny Eddie Bauer Ramatoa Sun Valley Down Parka amin'ny Amazon-namboarina vola feno 650 feno paosy zipper nalahatra volon'ondry
Mitsitsia hatramin'ny 47% amin'ny volavolan-dehilahy sy volom-borona Jacket-Nylon an'ny vehivavy Columbia mitazona anao ho maina sy ho voaro na dia amin'ny oram-be
Mividiana solomaso boribory boribory lavalava Ray-Ban ary mitahiry 20% amin'ny takelaka metaly miaraka amina fiarovana UV
Mividiana Sunglass Round Blazom-behivavy an'ny Ray-Ban amin'ny Amazon ary mitahiry 30% - miaraka amin'ny fefy plastika sy ny fiarovana UV
Mitsitsia 50% amin'ny solomaso solomaso Ray-Ban Blaze Wayfarer ao amin'ny Amazon-iray amin'ireo endrika malaza indrindra ao amin'ny portfolio Ray-ban
Mividy Sunglassa Square-Square Blasse Double-Square Blas amin'ny Amazon ary ahangona 47%-miaraka amina frame metaly toradroa miaraka amina fisaka fisaka sy avo roa heny
Mitsitsia 26% amin'ny Sunglass Holbrook Square any Oakley Men amin'ny famolavolana kilasika tsy manam-potoana ao Amazon izay mampiditra ny haitao Oakley maoderina
Vidio solomaso mahitsizoro mahitsizoro any amin'ny Amazon ny volan'ny Oakley Men's Flak 2.0 ao amin'ny Amazon ary tahirizo 32% ny frame tsy mahazaka tanjaka ary maivana sy milamina ary miaro tontolo andro.
Mitsitsia $ 73 amin'ny Sunglass Rectangular Rectangular any Oakley Men ao amin'ny Amazon-ny valizy dia fefy tsy mahazaka adin-tsaina, maivana ary maharitra, ary ahazoana mitafy tontolo andro.
Mividiana Sunglass de l'arrecteur de l'Ollleure priaire an'nyleyleyleyley any Amazon ary vonjeo 21% -Manomeza fiarovana 100% UV amin'ny UVA, UVB, UVC ary hazavana manga manimba hatrany amin'ny 400mm
Mividiana solomaso solomainan'ny Pilot Oakley Vehivavy misimisy amin'ny Amazon ao Amazon ary mitehiriza 25% -Manome tanjaka sy fahaiza-manatsara hanoherana ny fiovana na ny fiovana.
Mitsitsia $ 81 amin'ny Sunglass Maint Rectangular Mainlink Men an'ny Lehilahy ao amin'ny Amazon-natao ho an'ny tarehin-jiro mamiratra, mahatonga ny tontolo iainana hita mazava kokoa sy voajanahary
Mitsitsia hatramin'ny 44% amin'ny sneaker Nike, Adidas, New Balance, ASICS ary Skechers amin'ny varotra Amazon Prime Day
Mitsitsia hatramin'ny 38% amin'ny kiraro, kiraro, kiraro avo sy kiraro ho an'ny vehivavy ao amin'ny Amazon Prime Day fampiroboroboana-kitiho ny rohy hahazoana ny vidiny farany amin'ny kirarom-behivavy, manomboka amin'ny kiraro mandeha tongotra ka hatrany am-palarano sy lava
Mitsitsia hatramin'ny 43% amin'ny kiraron'ny ankizy amin'ny fampiroboroboana ny Amazon Prime Day-mitsitsia kiraro, baoty, kapa ary kiraro ho an'ny zazalahy sy zazavavy
Mividiana kiraro fitadiavana crossover New Balance ho an'ny olona ao Amazon, vonjeo ny hoditra 22% -100%, ny fandriam-pahalemana rehetra
Mividiana sneakers New Balance Vehivavy Fuelcore Nergize V1 ao Amazon, vonjeo ny fibre synthetic 38% -100%, ny fanohanana endrika kanto
Mitsitsia 26% amin'ny Skechers Men Delson Camben Sneakers amin'ny Amazon-tsy slip, fehin-kibo, fanatanjahan-tena ary famolavolana fialamboly
Mitsitsia amin'ny kiraro joging gel-Venture ASICS an'ny lehilahy amin'ny Amazon-Premium insilience avo lenta ary fitantanana hamandoana tena tsara
Vidio ny Skechers Ladies Go Joy Walking Shoes amin'ny Amazon ary tahirizo 40% - maivana sy malefaka 5Gen
Mitsitsia 43% amin'ny Deer Stags Boys Oxford Shoes amin'ny Amazon-Soft, fametahana harato tery ary famolavolana elatra
Mitsitsia 44% amin'ny kiraro Fila Women Disruptor II amin'ny Amazon vita amin'ny hoditra premium sy maivana
Mitsitsia amin'ny kiraro fitsangantsanganana vehivavy gel ASICS amin'ny fanohanana kiraro fihazakazahana GEL-Venture® 7 azo atokisana Amazon dia hanome anao ny tombony ilainao isaky ny mihazakazaka.
Mitsitsia 28% amin'ny Skechers Afterburn amin'ny fanakatonana rojom-bozaka matevina sy mihaja amin'ny Amazon ary ny vozon'akanjo ombelahin-tongony vita amin'ny kitrokely sy ny lela hahazoana fampiononana fanampiny
Mividiana kiraro Harman Run an'ny vehivavy Reebok vita amin'ny kiraro Harman Run ao Amazon ary tehirizo ny mpitsangatsangana 23% miaraka amina afovoany EVA hanome fanohanana ary mety haharitra amin'ny diabe sy jogging marobe
Mitsitsia hatramin'ny 25% amin'ny kiraro lamaody Fenta an'ny lehilahy Steve Madden amin'ny Amazon "lace-up" mahazatra miaraka amin'ny faladianao, misy loko miloko 5
Mividiana Sneakers Carina Vehivavy PUMA ao Amazon ary mitahiry hatramin'ny 42% Sneakers mahazatra vita amin'ny hoditra sentetika 100% miaraka amin'ny faladianao
Mividiana kiraro fanatanjahan-tena miompana amin'ny crossing vaovao amin'ny Amazon Balance vehivavy 608V5 vaovao ary mitahiry hatramin'ny 31% kiraro fiofanana azo antoka amin'ny fomba azo antoka miaraka amin'ny ondana rehetra
Mitsitsia hatramin'ny 32% amin'ny Skechers Work Cessnock kiraro amin'ny harato miaina sy fantsom-boninkazo azo zakan'i Amazon ary kodiarana tsy misy slip
Mitsitsia hatramin'ny 43% amin'ny kiraro lamaody vita amin'ny hoditra mahazatra an'ny lehilahy Reebok amin'ny lokon'ny hoditra vita amin'ny Amazon-vintage sy ny loko vita amin'ny fotsy sy ny siligaoma
Vidio sneaker Under Armour Kids 'PreSchool Assert 8 Alternate Closure amin'ny Amazon ary manangona hatramin'ny 25% amin'ny maivana maivana sy milamina, miaraka amin'ny tady sy tadiny, mora apetraka ary esorina
Mitsitsia hatramin'ny 34% amin'ny akanjo ivelany sy lamaody amin'ny fampiroboroboana ny Amazon Prime Day-jereo ny fihenam-bidy farany amin'ny lobaka, akanjo ba, palitao, palitao, pataloha jeans, pataloha fohy, akanjo fohy ary akanjo fanatanjahan-tena.
Mitsitsia hatramin'ny 40% amin'ny akanjo sy lamaody vehivavy ao amin'ny Amazon Prime Day fampiroboroboana-tsindrio ny rohy hahazoana ny vaovao farany momba ny tampon'ny vehivavy, akanjo ba, palitao, palitao, akanjo, pataloha jeans, pataloha, zipo, legging, akanjo fanatanjahan-tena, atin'akanjo, akanjo fatoriana sy fitafiana Fanapahana akanjo mahazatra
Mitsitsia hatramin'ny 58% amin'ny akanjon'ny ankizy amin'ny fampiroboroboana ny Amazon Prime Day - mitsitsia amin'ny palitao, akanjo fanatanjahan-tena, akanjo mandry ary atin'akanjo ho an'ny zazalahy sy zazavavy
Vidio Wrangler Authentics Men's Flex Waist Jean an'ny olona any Amazon ary vonjeo 20% -raikitra amin'ny tady denim
Ankafizo fihenam-bidy 35% amin'ny vahaolana demokratika Ab vehivavy amin'ny fanao am-paosy Amazon-6 amin'ny denim tactile lafo vidy
Vidio Calvin Klein Vehivavy Cotton Bralette maoderina eto Amazon ary hitahiry hatramin'ny 41% -Ny kofehy mifangaro vita amin'ny landihazo miaraka amin'ny fehikibo Racerback
Vidio pataloha jeans mahia mahia amin'ny vehivavy avo lenta any Amazon ary vonjeo ny 40% -mihoatra ny valahany ary ahena ny valahana sy ny feny
Mitsitsia hatramin'ny 51% amin'ny alàlan'ny fividianana T-shirt script ofisialy lehilahy tompon-daka amin'ny Amazon-miaraka amina patch patch C eo amin'ny tanany havia
Mitsitsia hatramin'ny 33% amin'ny Jeans Bootcut Classic an'ny Vehivavy ao amin'ny Amazon-hipetraka eo am-balahana ary mandalo mora foana amin'ny valahana sy fe.
Mitsitsia hatramin'ny 41% amin'ny pataloha jogger suede an'ny lehilahy Tompondakan'ny volon'ondry-Amazon dia voampanga any ivelany ary malefaka be ao anatiny
Vidio ny lobakan'i Calvin Klein ho an'ny lehilahy amin'ny Amazon mba hitehirizana hatramin'ny 62% - miaro azy ny UV ary ampiarahina amin'ny kofehy faran'izay tsara mba hanomezana rivotra sy rivotra.
Mitsitsia hatramin'ny 52% amin'ny antsipirian'ny Tompondakan'i Amazon's Vehivavy Powerblend Boyfriend Crew-V-hatoka amin'ny vozony sy tanany raglan tsara tarehy
Mitady kiraro, akanjo ary lamaody malaza kokoa sy be mpangataka ve ianao? Tsindrio eto raha hijery ireo safidy rehetra momba ny fifanakalozana ao amin'ny pejy “Prime Day” an'i Amazon.
Mandritra ny fotoana voafetra ihany ny fampiroboroboana ny Andro Golden. Ny atody mpivarotra atody dia mahazo komisiona amin'ny fividianana ny rohy nomena.
Ny hetsika varotra Prime Day isan-taona any Amazon dia maharitra 48 ora, manome tahiry be ho an'ny marika ambony an'arivony.
Tsy manana mpikambana ao amin'ny Amazon Prime? Manomboha andrana maimaimpoana mandritra ny 30 andro izao ary araraoty ny fampiroboroboana ny Andro voalohany.
Azonao atao ny manangona vola be mandritra ny andro lehibe, toy ny palitao, akanjo fahavaratra, akanjo ambony sy T-shirt, kiraro lamaody, kiraro ary kojakoja ilaina (toy ny famataranandro sy solomaso solomaso). Na mitady kiraro, akanjo na solomaso ianao dia saika afaka manome izay ilainao i Amazon. Ao amin'ny sokajy lamaody ho an'ny vehivavy dia ho hitanao ny akanjo, kiraro ary kojakoja maro samihafa. SL Fashions sy BTBFM dia sasany amin'ireo marika marobe izay manolotra akanjo samihafa amin'ny fotoana samihafa. Ohatra, ny tuxedo an'i SL Fashions dia tena mety amin'ny fety mahazatra, fety birao, lanonam-pisakafoanana, fampakaram-bady sns. Omena kojakoja toy ny solomaso, poketra ary famantaranandro koa.
Ao amin'ny departemantan'ny lamaody ho an'ny lehilahy, ianao koa dia hahita safidy isan-karazany amin'ny akanjo, firavaka, kiraro ary kojakoja. Manomboka amin'ny Sneakers ka hatrany amin'ny baoty, amin'ny loafer ka hatrany amin'ny kapa dia samy manana izany ny olona rehetra. Raha mitady kiraro avo lenta ianao dia Adidas, Lacoste, Sperry ary Tommy Hilfiger no sasany amin'izy ireo. Ny kiraro adidas an'ny Lehilahy Adidas dia manana ny hatsaran-tarehin'ny adidas, izay mahatonga azy ireo ho maro karazana.
Nataon'i Amazon ny hetsika fiantsenana lehibe indrindra nataony tamin'ny andro voalohany tamin'ny taon-dasa. Ny mpikambana praiminisitra dia afaka mankafy fihenam-bidy mihoatra ny iray tapitrisa.
Mila akanjo, kiraro ary lamaody lahy sy vavy bebe kokoa? Tsindrio eto raha hijery ny safidin'ny fifanakalozana iray manontolo amin'ny pejy fampiroboroboana ny “Prime Day” an'i Amazon.
Momba ny atody antsinjarany: atody mpivarotra atody mizara vaovao momba ny fifanakalozana e-varotra. Amin'ny maha mpikambana anao ao amin'ny Amazon Associate Retail Egg, afaka mahazo vola ianao amin'ny alàlan'ny fividianana sahaza. Mifandraisa: Andy Mathews (andy@nicelynetwork.com)
Ny kaonty iray any San Francisco dia niresaka ny maha-zava-dehibe ny fitantanan-draharahan'ny Biden amin'ny portfolio famatsiam-bola isaky ny miresaka amin'ny mpanjifa.
Ireo mpampiasa izay tsy nametraka baiko amin'ny sehatra JD rehetra dia afaka mahazo tapakila fihenam-bidy! Miaraka amin'ny karatra Visao, kitiho mba handoavana amin'ny JD.com voalohany ary ankafizo ny fihenam-bidy!
Nilaza ilay orinasa fa i Lee Kun-hee, izay nanangana ny Samsung Electronics ho goavambe eran-tany amin'ny smartphone, semiconductors ary fahitalavitra, dia maty ny alahady teo rehefa niditra hopitaly nandritra ny enin-taona mahery tamin'ny aretim-po tamin'ny alahady. Lee dia 78 taona tamin'ity taona ity. Nanangana ny Samsung Group ho konglomerat lehibe indrindra any Korea Atsimo izy ary tonga lehilahy manankarena indrindra tany Korea Atsimo. Jeong Sun-, tale jeneralin'ny orinasam-pikarohana momba ny orinasa Chaebul.com, dia nilaza hoe: “Ny fiakarana mahatalanjona nataon'i Lee any Korea sy ny fomba nidiran'i Korea Atsimo ho fanatontoloana dia tandindona tokoa ka hahatsiarovan'ny Koreana maro ny fahafatesany.
Harry Markopolos (Harry Markopolos), matihanina avy amin'ny derivatives teo aloha izay nitodika tany amin'ny mpanao fanadihadiana sandoka ara-bola tsy miankina, nahita ny tetika Bernie Madoff Ponzi $ 65 miliara, fa tsy noraharahian'ny SEC nandritra ny sivy taona. Amin'ny maha-mpitsikera ny mpitondra ny fanjakana amerikana azy, dia i Harry izao no mihevitra ny sehatry ny fanaraha-maso sy ny indostrian'ny fiantohana ho tranga fisolokiana lehibe manaraka.
Miaraka amin'ny karatra Visa, azonao atao ny mankafy fihenam-bidy hatramin'ny 20% amin'ny fiantsenana ao amin'ny Global Trends Department Store! Zahao ny fampiroboroboana farany ny fivarotana lamaody an-tserasera toa ny Mytheresa sy Giglio.com!
Microsoft, Apple, Abidia, Facebook, Amazon, AMD, Caterpillar, Comcast, GE, Ford, Pfixer, Visa, UPS, Exxon Mobil, Twitter ary ireo orinasa hafa dia nitory ny valiny telovolana fahatelo.
Mora ny mividy tahiry, saingy sarotra ny mividy ny tahiry mety raha tsy misy paikady voasedra ara-potoana. Ka inona ny tahiry tsara indrindra hovidiana na apetraka amin'ny lisitra fiambenana ankehitriny?
Ny tsenam-bola dia mety miaraka amin'ireo mpitarika toa an'i Microsoft sy Tesla. Rehefa nanakaiky ny fifidianana ary nirongatra ny trangana virus coronaavida dia io no herinandron'ny karama farany ambony.
Manomeza fanampiana avy hatrany hanohanana ny masoivohon'ny mpitsoa-ponenana mikambana, hahafahan'ireo mpitsoa-ponenana mahazo kit vonjy maika hiatrehana ny orana ary hamonjy azy ireo amin'ny voina!
Iza amin'ireo tetika fampiasam-bola niatrika ny fitsapana ny fotoana? Fampiasam-bola fitomboana. Ny manam-pahaizana ao amin'ny Wall Street dia mino fa ny tahiry manana vinavina mitombo be dia be dia be dia be dia be ny tahiry faran'izay mafy. Ity mety fitomboana ity dia mihoatra ny lavitra, ary ireo anarana ireo dia hahatratra fiverenana be amin'ny taona 2020 sy ho avy. Raha ny voalaza, raha tsy hilaza afa-tsy ny kely indrindra, ny fitadiavana stock izay tafiditra ao amin'ity sokajy ity dia mety ho fanamby. Mino ny mpandinika fa paikady iray ny mihemotra, mijery ny sary lehibe, ary mifantoka amin'ireo orinasa manana fitomboana maharitra mifototra amin'ny zava-bita mahavariana isan-taona. Raha mitadidy an'io ao an-tsaina izahay dia nampiasa ny angon-drakitra TipRanks hamantarana ireo tahiry fitomboana telo izay nomen'ny mpandalina tombam-bidy. Ireo stock telo dia nahavita fitomboana be tamin'ny taona 2020 ary vonona ny hanohy hiakatra. Pennsylvania National Game Company (PENN) Voalohany, manana ny Company National Game Pennsylvania (Pennsylvania National Game Company) izahay, izay tompona sy mitantana toeram-pilalaovana sy hazakazaka ary orinasa misy ny lalao video any Etazonia. Ny anarana dia nitombo 146% isan-taona, saingy misy ny mpandinika Wall Street mino fa mbola betsaka ny solika ao anaty tanky. Vao tsy ela akory izay ny PENN dia nanambara mialoha ny valin'ny telovolana fahatelo izay nihoatra ny nandrasana. Manantena ny orinasa fa ny tombom-barotra ho an'ny telovolana dia hitombo maherin'ny 900 isa fototra, ary ny EBITDAR ahitsy dia hitombo 5% isan-taona, na dia 10% isan-taona aza ny fidiram-bola. Ny mpandalina kintana dimy Joseph Greff dia nilaza tamin'ny mpanjifa fa "JP Morgan Chase" dia nanambara: "Ny fanarenana ny indostrian'ny lalao isam-paritra tamin'ny Mey / Jona dia nitohy hatramin'ny telovolana fahatelo, ary ny vola miditra dia tsara kokoa noho ny nandrasana. Vetivety dia noterena ny fangatahana Taorian'ny niverenany tamin'ny ara-dalàna, ary satria nihatsara ny fahombiazan'ny COVID teo aloha, dia sarotra / tsy tafakatra ny fandaniana amin'ny fandidiana. Nihevitra izahay fa nihena ny tahan'ny fitomboana. ” Rehefa nilaza izany i Greif, dia nanaiky fa noho ny fahombiazan'ny vidin'ny stock, dia nisy mpandalina sasany namela ny famotsoran-keloka ”. Na izany aza, mbola mino ihany izy fa "ny sandam-bola sy ny catalyst ho an'ny ho avy". Hoy ny hevitry ny mpandinika: “… Misy fihetseham-po mihoampampana eo amin'ny mpamatsy vola. Mino izahay fa mahasalama izany ho an'ny tahiry ary saika ilaina ny mitombo hatrany ny tahiry; Mino izahay fa ny mpampiasa vola nentim-paharazana dia mbola tsy nampijalina tanteraka. Mino izahay fa ny mpampiasa vola dia misalasala amin'ny fahaizan'ny PENN mifaninana amin'ny DraftKings, Fanduel, Caesars Entertainment, MGM / GVC, sns. Ny haben'ny fifandanjana azon'ny PENN dia afaka mamatsy vola ny vidin'ny mpanjifa filokana ara-panatanjahantena voalohany, saingy mino izahay, Raha jerena fa ny fananana farany nanangona vola 950 tapitrisa $ ny fanangonam-bola, ny risika amin'ity fifaninanana ity dia nahena tao anatin'ny faritra misy dikany. " Ny tena zava-dehibe dia nanangana ny fampiharana filokana Barstool Sports any Pennsylvania ny PENN. Greff niantso ity famoahana tany am-boalohany ity ho "mamporisika amin'ny lafiny volany sy ny fandaniam-bola", ary nanaporofo "ny mety hisian'ny fomba tokana hahazoana fizarana izany." Ho fanampin'izay, mihombo hatrany ny tanjaky ny Barstool Sportsbook. Ny tena zava-dehibe dia mino i Greff fa ny filokana sy ny iGaming tontolon'ny fanatanjahantena ankehitriny dia mitovy amin'ny fiakaran'ny tsenam-paritra tamin'ny taona 1990, raha nitodika tany amin'ny loharanom-bola vaovao ireo fanjakana manana fatiantoka amin'ny teti-bola, toy ny lalao boatin-drano mba hanampiana ny volany. fahampiam. Mikasika izany, hoy ilay mpandalina: “Mino izahay fa ny fanjakana tsirairay avy dia saika manana ny andrasana amin'ny USSB sy iGaming, ary PENN no iray amin'ireo mpandresy. Tianay ny lamina filalaovana / filokana ara-panatanjahantena / filokana iGaming any Etazonia ary mahita toerana hitomboana. . " Eny, tsy mahagaga raha nijanona niaraka tamin'ny Bulls i Grave. Ankoatry ny fanomezana isa "be loatra" dia nametraka tanjona $ 83 ho an'ny tahiry ihany koa izy. Raha tratra ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana ho avy io tanjona io, dia mety hahazo tambiny 32% ny mpampiasa vola. (Hijerena ny rakitsoratra Greif, kitiho eto.) Inona no ambaran'ny sisa amin'ny Wall Street? Fividianana sivy, fananana telo ary fivarotana iray no navoaka tao anatin'ny telo volana lasa. Vokatr'izany, PENN dia nahazo isa naoty "medium buy". Miorina amin'ny tanjona antonony $ 76.77, ny vidin'ny tahiry dia mety hiakatra 22% amin'ny taona ho avy. (Jereo ny fanadihadiana momba ny tahiry Penn National Gaming ao amin'ny TipRanks.) Redfin (RDFN) Redfin dia nanomboka tamin'ny sehatry ny fikarohana mifototra amin'ny sari-tany ary nanitatra ny isan'ny vokatra nataony mba hahatonga ny lalao ho an'ny mpianakavy, ny debut ary ny fizotran'ny fampiantranoana haingana sy ho mora kokoa. Ao amin'ny Wall Street, misy ny olona mieritreritra fa ny anarana dia tsy hoe momba ny firongatry ny fangatahana COVID fotsiny, ary ny tombony 113% isan-taona dia vao manomboka. Na dia nesorin'ny RDFN aza ny vinavinan'ny telovolana mahery, dia somary diso fanantenana ny mpampiasa vola tamin'io vokatra io. Ny Jake Fuller an'ny BTIG dia nanipika fa mety hihena ny vidin'ny tahiry satria "avo ny andrasana ary ny fiakarany antonony ny tahan'ny fidiram-bola dia manodidina ny 2%" ary "ny mpamatsy vola dia manome valisoa ny gadona tarihin'ny feo, raha ny RDFN kosa dia taraiky ao ambadik'io fanantenana io." Mino i Fuller fa tsy ny RDFN no ifantohan'ny sain'ny maro, izay manondro fa mety tsy nahita ny fampahafantarana ny vola ny mpampiasa vola. Na izany aza, heveriny fa mety tsy hahatratra ny ampahany lehibe amin'ilay piozila i Wall Street. Ilay mpandalina kintana dimy dia nilaza hoe: "Ny mety tsy raharahiana eto dia ny RDFN nampiakatra ny tahan'ny kaomisiona nefa tsy misy fiatraikany lehibe amin'ny taham-panovana, izay hanatsara ny fomba fijery ny tombom-barotra RDFN." Noho izany antony izany dia hataony Ilay tombony be 2021 dia antenaina hitombo 47%. Raha mijery akaiky ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny telovolana, ny RDFN dia niaina fangatahana mafy ary ny fidiram-bolan'ny serivisy trano dia nitombo 36% isan-taona. Ny habetsahan'ny fifamoivoizana sy ny habetsahan'ny fifanakalozana dia nitombo isam-bolana ihany koa. Na izany aza, marihina fa ny fampisondrotana dia entin'ny fidiram-bola isaky ny fifanakalozana. Fuller dia nilaza hoe: "Zava-dehibe izany satria mampiseho fa handray ny anjaran'ny komisiona andrasana amin'ny farany." "Araka ny antontan'isa anay, ny vola miditra amin'ny serivisy trano amin'ny 1,68% an'ny GTV amin'ny telovolana fahatelo 2019 sy ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020 1,78% dia nitombo ho 1.85% tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2020. fifamoivoizana be amin'ity faritra ity. Na dia sarotra aza ny manombana ny fikirizan'ny fangatahana, ny fiakaran'ny vidiny sy ny taha-bolan'ny tombony tsara dia tokony haharitra ”hoy i Fowler. Mifanaraka amin'ny fanantenana ananany, Fuller dia nanohana ireo omby, namerimberina ny isa momba ny fividianana sy ny vidin'ny stock 65 $. Ity tanjona ity dia maneho ny fahatokisany ny fahaizan'ny RDFN hitombo 45% amin'ny taona ho avy. (Hijerena ny rakitsoratr'i Fuller, kitiho eto.) Rehefa nifindra tany amin'ny faritra hafa tao Wall Street, dia vao mainka nisara-kevitra. Tao anatin'izay telo volana lasa izay dia mividy 6, fananana 5 ary fivarotana 1 no natokana. Araka ny filazan'ny Wall Street, RDFN dia mpividy antonony. Ny tanjona antonony vidin'ny $ 50 dia midika hoe 11% ambony. (Jereo famakafakana tahiry Redfin ao amin'ny TipRanks) Vertiv Holdings (VRT) Amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy fitaovana, rindrambaiko ary mpanome serivisy an'izao tontolo izao, Vertiv Holdings dia nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny tsenan'ny fifandraisan'ny rafitra niomerika, izay mila isan'ny maro ilaina. ampitaina, hamakafaka, hokarakaraina ary hotehirizina. Nilaza i Wall Street fa nisondrotra 71% izy tamin'ity taona ity, ary mety hisy tombony bebe kokoa. Na dia miakatra be aza ny vidin'ny tahiry, dia mbola mino ny mpandalina Wolfe Research, Nigel Coe, fa tsara ny toe-javatra mety hitranga / valisoa. Nanazava izy hoe: "Mino izahay fa Vertiv dia karazana tsy fahita firy izay afaka misarika mpampiasa vola marobe: orinasa mitombo antonony izay afaka manome fitomboana tombony amin'ny fihenam-bidy ary eo ambanin'ny andraikitry ny ekipa mpanatanteraka ambony." Raha mikasika ny VRT Amin'ny làlana mankany amin'ny fitomboana, ny tsenany farany dia ny ivon-tahiry sy ny fifandraisan-davitra. Ireo habaka ireo dia ireo faritra andrasan'ny Coe hahatratra ny fitomboana amin'ny taona 2020 sy 2021, ary koa ireo fatiantoka maharitra maharitra ateraky ny fitomboan'ny fitomboan'ny angon-drakitra sy ny fanavaozana 5G. Ho fanampin'izany, entin'ny ezaka hitazonana ny vidiny raikitra tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny asa isan-karazany sy ny fampihenana ny fahasarotan'ny fandaminana, ny fitantanana dia nanoritra fomba iray hanitarana ny tombom-barotra hatrany amin'ny teboka 500. "Ity dia script navoakan'ny filoha eksekutif David Cote nandritra ny fotoana nitondrany tao Honeywell, izay mandresy lahatra antsika fa ny script mitovy amin'izany dia azo apetraka any Vertiv," hoy i Cohen. Tsara ny manamarika fa ny VRT nisintona tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2020, miaraka amin'ny trosa mitentina US $ 2,1 miliara ary trosa / EBITDA mahatratra 4,2 heny. Na dia any amin'ny faran'ny haavo an'io faritra io aza dia mino i Coe fa mety hiala haingana ny taratasy mizana. Noho izany antony izany dia heveriny fa amin'ny 2023 ny tahan'ny trosa / EBITDA dia indroa, avy eo ny vola sisa tavela dia hahatratra 1 miliara dolara amerikana. "Tsy mieritreritra izahay amin'izao fotoana izao fa ny Vertiv dia tantara mazava momba ny fanaparitahana renivohitra, saingy mety hipoitra ao anatin'ny fe-potoana 2022/23-mazava ho azy fa afaka mahita hetsika fandraisana anjara hanatsarana ny fahaizany amin'ny sehatry ny fizarana herinaratra sy ny sosona DCIM isika. Safidy hafa azo atao ao anatin'izany ny famonoana ireo antoka ara-bola (ireo dia hita taratra ankehitriny amin'ny fikajiana ny isa isa) ary ny fomba fizarana dividends, izay hanitatra ny fahafahan'ny tompona andrim-panjakana. Tsy azontsika atao ihany koa ny tsy miraharaha ny zava-misy fa fitaovana elektrika lehibe kokoa ny haben'ny fiaraha-miasa stratejika apetraky ny mpandray anjara amin'ny tsena, ireo mpandray anjara ireo dia tsy mpandray anjara lehibe ao amin'ny foibe angon-drakitra. ” Ny zava-drehetra nataon'i VRT dia nandresy lahatra an'i Coe hamerina ny laharana mihoatra ny endriny. Nandritra ny fiantsoana safidy dia nametraka tanjona $ 23 izy, milaza ny mety ho fisondrotana 22%. (Raha hijery ny rakitsoratr'i Coe dia kitiho eto) Manaiky ve ireo mpandinika hafa? izy ireo dia. Tao anatin'ny telo volana lasa dia 4 naoty 4 "mividy" marina no navoaka. Noho izany, mazava ny hafatra: VRT dia fividianana matanjaka. Raha jerena fa ny salan'isa kendrena dia $ 20.75, ny vidin'ny tahiry dia mety hiakatra 10% amin'ny taona ho avy. (Jereo ny fanadihadiana ny tahiry Vertiv Holdings ao amin'ny TipRanks) Fialana andraikitra: Ny fomba fijery aseho amin'ity lahatsoratra ity dia ny an'ny mpandalina lehibe ihany. Ny votoatiny dia ho an'ny referansa ihany. Alohan'ny hanaovana fampiasam-bola dia ilaina ny manao ny fanadihadihana ataonao.
Ny tatitra momba ny vola miditra sy ny toekarena lehibe amin'ity herinandro ity dia havoaka amin'ny faran'ity herinandro ity, ary ny ankamaroan'ny tahiry FAANG dia notaterina taorian'ny faran'ny alakamisy.
Tamin'ny herinandro nifarana tamin'ny 22 Oktobra, ny tahan'ny zana-bola nindramina dia nidina mba hampidina ambany. Antenaina fa hisy fiantraikany hatrany amin'ny politika COVID-19 sy amerikana amin'ity herinandro ity.
Ny endrik'i Suntory tsy manam-paharoa momba ny menaka trondro “DHA & EPA + Sesame Ming E”, kapsily 4 isan'andro, dia afaka manafoana ny krizy aretim-po, mamerina amin'ny laoniny ny ain'ny aty, mampitombo ny torimaso ary manjary atahorana ho tandindomin-doza! Mihena 10% mandritra ny fotoana voafetra, aza hadino izany!
AMD (AMD) ny tatitra momba ny vola miditra ampahefa-potoana fahatelo dia kasaina hivoaka aorian'ny fikatonana ny talata izao, izay fotoana mahaliana ho an'ny indostria semiconductor. Ny Wall Street Journal dia nitatitra fa ny AMD (AMD) dia mikasa ny hanitatra mavitrika ny orinasany amin'ny alàlan'ny fividianana mety (XLNX) (XLNX). Mandritra izany fotoana izany, ny mpifaninana lehibe indrindra aminy (INTC) dia niasa mafy hanohy hamokatra ireo haitao mandroso ilaina amin'ny famokarana semikonduktor avo lenta.
* Ny tantaran'i Barron tamin'ity faran'ny herinandro ity dia manadihady ny fahatsinjovan'ireo goavambe zava-pisotro misy alikaola eto amin'ny tontolon'ny valanaretina. * Ny lahatsoratra manasongadina hafa dia miresaka momba ny fiakaran'ny tahiry eo an-tsena sy ny toerana hahitana ny vola azo. * Ho fanampin'izany, misy ny fanantenana ho an'ny fitokisana amin'ny famatsiam-bola amin'ny trano sy tany, mpandraharaha fivarotana lehibe, ary bioteknolojia homamiadana. Ny tantaran'i Andrew Bary “Ny antony hisehoan'i Coca-Cola hiseho indray” dia mampiseho fa ny orinasa izay niaritra indrindra tamin'ny valanaretina dia Coca-Cola (NYSE: KO). Na izany aza, rehefa miverina amin'ny ara-dalàna ny olona eo amin'ny tontolon'ny fanaovana vaksiny, ny fitaomana manerantany an'ny goavambe fisotroana iraisampirenena dia mety hahatonga azy hiakatra amin'ny haavo vaovao. Reshma Kapadia's "Ireo tsenan-tsena miseho ireo dia afaka mifaninana amin'ireo goavambe teknolojia amerikana", hoy izy, taorian'ny fihenan'ny folo taona, mitombo ny tahiry eo an-tsena. Orinasa Internet sy fahasalamana maro any amin'ny tsena any ivelany no mbola mizotra amin'ny làlana fitomboana, manome fotoana lehibe. Mendrika jerena ve ny Alibaba Group Holdings Limited (NYSE: BABA)? Tao amin'ny "Tahirim-bola telo natokana ho an'ny mpitsabo hijinja ny sehatry ny fahasalamana", Darren Fonda (Darren Fonda) dia nanaporofo fa ireo orinasam-pitokisana famatsiam-bola momba ny trano sy trano manokana misahana ny tobim-pahasalamana dia manana toerana fitomboana. Jereo hoe inona no tian'i Barron momba ny Physicians Realty Trust (NYSE: DOC) sy ny namany maro. NextEraEnergy Inc. (NYSE: NEE) dia nitombo 26% tamin'ity taona ity, araka ny "8 mba hanomezana tahiry azo antoka azo antoka" sy ny fanatsarana hatrany ny vokatra ", mpanoratra: Lawrence · C · Strauss (Lawrence C. Strauss). Saingy any an-kafa ao amin'ny sehatry ny fampitaovana dia tsy misy ny tsy fahampian'ny fihenan'ny famokarana sy ny fepetra fiarovana sasany. Xcel Energy Inc. (NYSE: XEL) dia iray amin'ireo safidin'i Barron. Ao amin'ny lahatsoratr'i Eric Savitz hoe "Aza ilaozana ny Big Stock Technology. "Mihabetsaka ny tebiteby", maninona no fantatra fa na dia miakatra aza ny ahiahy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso henjana momba ny lalàna, dia mbola Apple (NASDAQ: AAPL) sy Microsoft (NASDAQ: MSFT) no nanavao ny orinasa fa kosa noho ny famitahana sy ny fanararaotana. Vakio ihany koa: tsenan'ny omby Benzinga tamin'ny herinandro: Boeing, Netflix, Pfizer, sns Jack Hough nanipika ny "Mitady fialantsasatra miantsena ho an'ny sandoka", niresaka ny antony mety hahatongavan'i Novambra ny fotoana mety hivarotana ny fatiantoka amin'ny hetra, toy ny Kohl's Corp. (NYSE: KSS) sy Macy's Inc. (NYSE: M). Nike (NYSE: NKE)? Voalohany, Sprout Farmers 'Market (NASDAQ: SFM) no mpandresy tamin'ny COVID-19, ary avy eo ny resin'ny COVID-19. Noho izany, ny “Sprout Inventory dia vonona ny hiverina” i Teresa Rivas. Taorian'ny fahaverezan'ny efa ho ny ampahefatry ny sandany tao anatin'izay telo volana lasa izay, antenaina hiverina ve ny mpandraharaha mpivarotra ambongadiny any Phoenix? Ao amin'ny "fanantenana momba an'i Tesla, telemedicine ary ny revolisiona génomika" In, Emily Liu dia nizara ny antony mahatonga ny mpampiasa vola ARK CEO ho mpianatra fanavaozana manakorontana, maninona i Tesla (NASDAQ: TSLA) no handao ny Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER) sy ny vovoka milamina amin'ny hafa. Bill Alper Bill Alpert's “Fihaonamben'ny homamiadana dia mety handrehitra ireo tahiry biotech ireo.” Nandritra ny simposium ENA tamin'ity taona ity dia nanao fivoriana an-tserasera ireo mpikaroka momba ny homamiadana hijerena data vaovao momba ny zava-mahadomelina andrana orinasa biotech maro. Fantaro ny momba an'i Barron Nahoana no mieritreritra fa ny Mirati Therapeutics Inc. (NASDAQ: MRTX) dia ho lasa iray amin'ireo orinasa be mpijery indrindra. Amin'ity herinandro ity ao amin'ny Barron Weekly: * Ohatrinona no andoavanao araka ny drafitra fandoavan-ketra ataon'i Biden sy Trump * Ahoana ny fomba hanampian'ny drafi-ketra ataon'ny kandidà ho filoham-pirenena ary handratra ny toe-karena-inona no mety ho dikan'ilay onja manga ho an'ny tsenan'ny fatorana * Maninona no 2021 no ho fanamby ho an'ny mpampiasa vola * Maninona no mendrika hijerena ireo tombana amin'ny indostrian'ny teknolojia avo lenta * Diesel Inona ireo famantarana mety halefan'ny tsena amin'ny toekarena * Ny ady amin'ny ady amin'ny herinaratra manaraka * Ny famerenam-bidy azo antoka dia azo antoka * Azo antoka ve ny fatorana sinoa toy ny fifamatorana nasionaly * Fotoana izao hanandramana ny tsenam-bola Thai amin'ny fotoana anoratana, ny mpanoratra dia ao amin'ny tahiry etsy ambony Tsy misy toerana. Araho an'i Benzinga ao amin'ny Twitter raha te hahita ireo vaovao lehibe sy hevitra varotra farany farany. Hijery fampahalalana bebe kokoa momba an'i Benzinga * Tsindrio eto raha hijery ny varotra safidy nataon'i Benzinga * Tsenan'ny omby Benzinga tamin'ity herinandro ity: Boeing, Netflix, Pfizer sns. * Ny fividianana insider fanta-daza tamin'ny herinandro lasa: Carnival, Citigroup ary maro hafa (C) 20 20 Benzinga.com. Benzinga dia tsy manome torohevitra momba ny fampiasam-bola. Zo rehetra voatokana.
Trifecta Stocks dia hamantatra ireo stock bearish isaky ny alarobia, ary mety misy fotoana mety hampiasana fampiasam-bola mahaliana ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fampiasana ny fandalinana teknikan'ireto tabilao stock ireto, ary raha ilaina izany, miorina amin'ny hetsika sy naoty farany nataon'ny TheStreet's Quant Ratings, dia nesorinay ireo anarana dimy. Na dia tsy handinika ny famakafakana ifotony aza izahay, dia manantena fa ity lahatsoratra ity dia hanome mpamatsy vola liana amin'ny tahiry manana teboka tsara hanombohana ireo enti-modiny momba ilay anarana.
Mamafaza lavenona eny an-dranomasina na zaridaina fahatsiarovana hanariana ny lavenona amin'ny fomba milamina sy maharitra kokoa amin'ny tontolo iainana. Mikasa mialoha, ampahafantaro ny fianakavianao ny fanirianao, ary misorata anarana ao amin'ny Central Register of Green Funerals.
PGGM goavambe fisotroan-dronono Holandey dia nampitombo avo roa heny ny fampiasam-bolany amin'ny tahiry PayPal ary nividy ny anjaran'ny Cisco sy Activision tamin'ny telovolana fahatelo. Nanapaka ny tahirin'ny Qualcomm izy io.
Nilaza ny mpanorina ny Alibaba, Jack Ma, ny asabotsy teo, fa ny lisitra indroa an'ny Ant Antoko goavambe fintech no Ant lehibe indrindra eto an-tany miorina amin'ny vidiny voafaritra ny zoma alina. Hoy izy nandritra ny Fihaonamben'i Bund tao amin'ny Ivotoerana ara-bola atsinanana any New York: "Sambany io no mamaritra ny vidin'ny lisitra marobe amin'ny tantaran'ny olombelona ivelan'ny tanànan'i New York." Miaraka amin'ny fanohanan'ny goavambe Shinoa Alibaba, e-varotra, manomana ny It ho voatanisa ao amin'ny tsena STAR any Hong Kong sy Shanghai mandritra ny herinandro.
PayPal manokatra ny tamba-jotra amin'ny Bitcoin sy ny crypto dia hanova ny fitsipi-dalao, saingy ity vaovao ity dia manafina hafatra lehibe kokoa sy manan-danja kokoa.
Ny vola isan-taona vaovao azo esorina amin'ny haba S hang -eng dia manome 10 taona ny fidiram-bola fanampiny ary manome antoka fa 1,73% -2% amin'ny famerenam-bola ao anatiny. 10 minitra eo ho eo vao mangataka fiantohana amin'ny Internet ary mihetsika avy hatrany.
Ny dividends sy ny tombom-barotra dia tsy ny antony lehibe indrindra tokony hividianan'ny mpampiasa vola na hijanonany amin'ireo orinasan-tsolika. Na dia mbola fanalahidy aza ny fiverenana dia mbola mitaky fanovana mialoha ny taona 2020 ny mpampiasa vola
(Bloomberg) -Ny Leon Black, miharatsy hatrany ny raharaha. Tao anatin'ny herinandro lasa izay, ny orinasam-bola goavambe an'ny Black, Apollo Global Management Inc. (Apollo Global Management Inc.) dia niatrika olana isan-karazany, izany hoe izy sy ilay filoham-pirenena mpanao heloka bevava Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein), filoham-pirenena fifandraisana efa an-taonany maro. Ny filankevi-pitantananany manokana dia nandidy ny hanombanana manokana an'i Black tenany. Avy eo ny volan'ny fisotroan-dronono any Pennsylvania naato ny fampiasam-bola vaovao-nanao toy izany koa i Connecticut. Mpanolotsaina lehibe iray-mpiandry vavahady manatanteraka ny fampanantenan'ny mpampiasa vola $ 160 miliara ny mpanjifa hanemotra, raha ny iray kosa mihevitra hetsika sahala amin'izany. Ireo mpanjifa izay nankafy ny karama Wall Street tsara indrindra nandritra ny taona maro dia mandinika indray ny fifandraisan'izy ireo amin'i Apollo. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nisy tatitra tao amin'ny New York Times izay nihantsy ny fandinihana indray an'i Epstein. · Maxwell (Ghislaine Maxwell) tsy voaisy tombo-kase ary omena fiheverana vaovao. Raha ny filazan'ny olona mahalala an'io raharaha io dia misy ny mpanjifa sasany tsy mino fa ny fanadihadihana nataon'ny orinasan'ny lalàna Dechert LLP dia ampy hanadio ny anaran'i Black, ary ny fiampangana ireo vola vaovao dia mety hiteraka fahavoazana amin'i Apollo raha manandrana mandroso izy. Manangona $ 20 miliara ho an'ny vola vaovao. Ny korontana ateraky ny areti-mandringana amin'ny tsenan-trosa no fotoana lehibe fampiasam-bolan'ny orinasa, izay fantatra amin'ny fividianana orinasa manahirana. Ny olona mahalala an'io raharaha io dia nilaza tamin'ny volana aprily fa i Apollo dia mitady hanararaotra ny savorovoro eny an-tsena ary hitrosa amin'ny trosa tsy miankina. Ny olana mitombo an'i Black dia mitaratra ny fiovan'ny politika eo amin'ny tontolon'ny fampiasam-bola, miaraka amin'ny vola lehibe manangasanga kokoa amin'ny tontolo iainana sy ny fiaraha-monina. Ary tena ilaina ny fitantanana. Ny fifantohana vaovao dia midika fa na eo afovoan'ny scandals aza, na ny fahatsinjovana fiverenana mihary aza dia mety tsy dia manintona loatra. "Na dia zava-dehibe foana aza ny fampisehoana dia tsy io ihany no antony", hoy i Gerald O'Hara, mpandalina iray ao amin'ny Jefferies Financial Group Inc. .. "Amin'ny lafiny sasany, dia vonona ny hanao sorona ny zava-bita ho an'ny hazakazaka tsara sy orinasa etika. ” Bloomberg dia nitatitra tamin'ny zoma fa nilaza ny mpanjifa ny consultant amin'ny fampiasam-bola, Aksia, mba tsy hampiditra vola amin'i Apollo. Connecticut dia nilaza fa hampiato ny fampiasam-bola vaovao amin'ny orinasa. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nilaza ny rafitra fisotroan-drononon'ny mpiasa ao amin'ny Sekolim-panjakana any Pennsylvania fa hampiato vetivety ny fampiasam-bola fanampiny ao Apollo, ary ny consultant Cambridge Associates dia mieritreritra ny tsy hamporisika ny orinasa hisotro ronono sy mpanjifa fisotroan-dronono. Mikasika ny vaovao fa nosamborina i Epstein tamin'ny taon-dasa, ny ahiahin'ireo mpampiasa vola dia natelin'ny tatitra New York Times. Taorian'ny nanamelohana azy tamin'ny fakana tovovavy mpivaro-tena tamin'ny taona 2008, dia namela 50 tapitrisa farafahakeliny ho an'i Epstein izy. Dolara. Tsy niampanga an'i Black ho mandika lalàna ilay lahatsoratra. Hatramin'ny namoahana ny tantara tamin'ny 12 Oktobra, ny vidin'ny tahiry Apollo dia nilatsaka 12%. "Vonona mafy izahay amin'ny fanatsarana ny mangarahara," hoy i Apollo tamin'ny fanambarana tamin'ny zoma, nanamarihana fa nifandray tamin'ny mpampiasa vola matetika i Black. "Na dia tsy nanao raharaham-barotra tamin'i Jeffrey Epstein aza i Apollo dia nangataka famerenana ivelany mahaleo tena ny fifandraisana matihanina teo amin'i Mr. Epstein i Leon." Nilaza tamin'i Apollo i Black tamin'ity volana ity. Taratasy iray avy amin'ny mpiara-miasa voafetra no nanambara fa tena nanenina mafy izy noho ny firotsahana tamin'i Epstein. . Nilaza i Black fa nitodika tany aminy momba ny hetra, ny drafitra momba ny tany sy ny asa soa izy, ary tsy nisy na inona na inona tao amin'ny tatitry ny New York Times izay nifanohitra tamin'ny famaritana teo aloha momba ny fifandraisany. Bebe kokoa: Ny rohy Epstein an'i Leon Black ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana vola izay mandrahona ny Apollo Investors dia tapaka tanteraka avy any Apollo satria ny volan'ny orinasa tsy miankina dia matetika no manidy ny renivohitra mandritra ny taona maro-maro ny olona vonona handray valiny avo lenta. Ireo mpamatsy vola telo izay tsy te-hotononina anarana dia nilaza fa raha tsy fahita ny valin'ny fanadihadiana dia mety hisafidy ny hitady any an-toeran-kafa ny mpanjifa. Manoloana ny fiverenan'ny orinasa malala-tanana, manintona manokana ny fisintahan'ny mpanjifa. Bloomberg dia nitatitra tamin'ny volana Janoary fa ny tahirim-bolam-bolan'ny Apollo voalohany dia nosokafana tamin'ny mpampiasa vola tamin'ny taona 2001, ary 44% ny vokatra isan-taona, fa na dia ireo mpampiasa vola izay maniry fatratra hampiasa vola bebe kokoa amin'ny fananana manokana aza dia mety hanana safidy hiverina hifidy. toerana. Sarah Sandstrom mpiara-miasa (Sarah Sandstrom) dia nilaza hoe: “Hazakazaka fifaninanana tena mahomby ity, ary mbola mahita zavatra amin'ny fizaram-bola izahay. Amin'ny lafiny maro, io zavatra io dia amin'ny lafiny politika fa tsy fomba fitadiavam-bola. ” Ao amin'ny Campbell Lutyens, ny orinasa dia manampy ny orinasa tsy miankina manangona vola. "Mitantara ny tantaranao manokana ianao ary manangana fifandraisana amin'ireo mpampiasa vola." (Nanampy ny hevitr'i Blake teo aloha ao amin'ny fehintsoratra 12.) Ho an'ireo lahatsoratra toy izany dia tsidiho azafady Bloomberg.com ary misoratra anarana izao raha te hanana loharanom-baovao matoky tena. © 2020 Bloomberg Records
Ny fisotroan-dronono dia mety tsy ahiahin'ny ankamaroan'ny tanora, saingy tokony ho izany. Izany dia satria aorian'ny fampifangaroana am-polony taona maro, ny fampiasam-bola kely ankehitriny dia azo ampitomboina amin'ny vola lehibe kokoa amin'ny ho avy. Ny Roth IRA dia fanombohana tsara.